प्रजातन्त्रपछि सडकबाट दरबारबिरुद्ध धावा बोल्ने पहिलो नेता स्व. अधिकारी - Ganatantra Online
काठमाडौं । मुलुकले आशा गरेका नेता थिए रवीन्द्र अधिकारी आज हामीमाझ हुनुहुन्न । संसदीय अभ्यासमा लामो समय बिताएर खारिएको अनुभवसहित मन्त्री बन्नुभएका अधिकारीको २०७५ साल फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । काठमाडौंबाट तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पुगेको मन्त्री अधिकारीसहितको टोली कार्यक्रम सकेर पाथीभरा हुँदै काठमाडौं फर्किने क्रममा फागुन १५ गते ताप्लेजुङको दारेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । आज (फागुन १५) उहाँको दोस्रो स्मृति दिवस सुरुमै स्व. अधिकारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आलेख अघि बढाउने अनुमति चाहें पाठकहरुसंग ।
स्व. अधिकारी यस्तै स्वाभावका हुनुहुन्थ्यो । अन्याय बिरुद्ध उहाँ जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुहुन्थ्यो । यसको एक होइन अनेक उदाहरण छन् । दरबारबिरुद्ध खुला रुपमा धावा बोल्ने खुला राजनीतिका पहिलो नेता अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कहिल्यै त्यसको ब्याज खोज्नुभएन । आन्दोलनका बेला टाउका फुटेका फोटा देखाएर लाभ लिनेहरुको भीडमा दरबारबिरुद्ध ५ लाखको हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाउने अधिकारीले त्यसलाई मात्र आफ्नो कर्तव्य सम्झनुभयो । मेरो बुझाइमा एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण यही हो।